Ukuba uneGPS S10 ngekhe uphelise umnxeba wevidiyo kwi-Snapchat | I-Androidsis
Sele zikho ezininzi abasebenzisi abafumana umnxeba wevidiyo owaphukileyo kwi-app ye-Snapchat kwiifowuni zabo ezinomngxunya kwiscreen esisekunene. Oko kukuthi, ezo fowuni ze-Samsung, njengeGPS S10, azinakho ukubizwa kwevidiyo kwi-Snapchat.
Kwaye nangona sijonge usetyenziso akabathandi abasebenzisi abanefowuni ye-Android kwaphela, inyani kukuba isetyenziswa zizigidi kwihlabathi liphela; nangona ibekwe kwingingqi kwaye ingasetyenziswa ngokubanzi ngamanye amazwe njengoko isenzeka kwezi ndawo.
Sele siyazi inguqulelo entsha ye I-Snapchat iphinde yenziwa ngokutsha ukusuka ekuqaleni, kodwa ngoku into esiyaziyo kukuba abasebenzisi banayo Iifowuni ezinemingxunya kwiscreen ibekwe kwicala lasekunene, iifowuni zevidiyo azinakuxhonywa njengoko iqhosha "lokugqibela lokufowuna" libekwe kanye kwelo cala leselula.
Nawaphi na amathuba efoto kunye nevidiyo ekhawulezayo ebonisa ifowuni xa isenzeka?
-Artem Russakovskii (@ArtemR) Ngamana 5, 2019
Into ehlekisayo kukuba iqhosha "lokugqibela lokufowuna" ayigutyungelwanga ngokupheleleyo ngokusikwa kwiscreen seGPS S10 +; Nanga amaqhinga aphambili kule fowuni inkulu ye-Samsung. Oko kungakuthinteli oko, emva kwemizamo eliqela, ekugqibeleni sinokuxhoma umnxeba, nangona amava omsebenzisi esokola kakhulu kwezi fowuni ngeSpapchat.
Le ngxaki ikhuselekile nayo Olunye uluhlu lwe-S10 inayo Njengomgangatho, i-S10e kunye ne-S10 5G banokusikwa okufanayo kwiscreen kwaye oku kuye kwavumela i-Samsung ukuba ichazwe njengenye yezona zinto zibangela ukwenzeka komhlaba kunye nenkqubela phambili kwezobuchwephesha.
Ngoku ngethemba I-Snapchat qhubeka nayo kwaye ucofe uyilo lweapp yakho ukwenzela ukuba abo basebenzise iGPS S10 babe namava aqhelekileyo njengabanye abanokuba nawo ngokuhambahamba kwabo. I-Snapchat ehlala isenza ukuba silwe namava ayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Umnxeba wevidiyo owaphukileyo kwi-Snapchat xa isetyenziswa kumngxunya wefowuni
Khwela idayinaso yakho kwiiMfazwe eziMagqabini zeMetri ezigcwele kwi-intanethi